Tuwiitariin ergaawwan siyaasa beeksisan maxxansuu dhowwuuf - BBC News Afaan Oromoo
Tuwiitariin ergaawwan siyaasa beeksisan maxxansuu dhowwuuf
Dhaabbilee miidiyaa hawaasummaa keessaa tokko kan ta'e tuwiitar ergaawwan waa'ee siyaasaa beeksisan dabarsuu dhorkuuf jedha.
Akka dhaabbati kun jedhutti ergaawwan siyaasaa seeraan nama bira ga'uu qabu waliin dhahuudhaan gurguruu yookiin bituun sirrii miti.
"Beeksisi karaa interneetii gaggeeffamu humna kan qabuu fi daadnii daldalaa isa guddaadha. Humna kana siyaasaaf dhimma itti baanaan balaa guddaa fida'' jedhan Hoogganaan DhaabbataTuwiitarii Jack Dorsey.
Morkataa tuwiitarii kan ta'e feesbuukiin dhiyeenyuma ergaawwan siyaasa beeksisan dhorkeera.
Feesbuukiin 'Like' fayyadamtootaa dhoksuu jalqabe
Miidiyaan hawaasummaa ergaawwan siyaasaa dabarsuu diduun isaanii filannoo bara 2020 irratti aanga'oota Ameerikaa gidduutti adda addummaa uumeera.
Duula Pirezidaanti Doonaaldi Tiraampi irra-deebiin filatamuuf gaggeessan kan hoogganan Brad Parscale "murtee kun miidiyaa hawaasummaatiin darbuun hojii mormitoonni Tiraamp isa kuffisuuf taasisaa jiraniidha'' jedhan.
Duula na filadhaa bakka bu'aa Dimokiraatotaa kan hoogganan Bill Russo gama isaaniitiin ''beeksisa siyaasaa doolaaraan beeksifachuurra dimokiraasiin keenya akkaataa fedhii hawaasaa guutuu danda'uu fi fudhatama akkamiin argata kan jedhurratti hojjechuutu fala ta'a'' jedhan.
Ameerikaan 'viizaaf' odeeeffannoo miidiyaa hawaasummaa gaaffatte
Hundeessaa fi Hoogganaan Feesbuukii Mark Zuckerberg dhimma kanarratti gaazexeessitootaaf wayita ibsa kenne imaammati dhaabbatasaa sirrii ta'uu dubbate.
"Ijaarsa dimokiraasii keessatti namni dhuunfaa tokko karaa miidiyaa hawaasummaa aanga'oota siyaasaa basaasuu fi to'achuun sirrii miti''
Dhorkaan tuwiitariin baase kun Sadaasa 22 irraa eegalee hojiirra oola.
Feesbuukiin Awustiraaliyaatti 'Like' fayyadamtootaa dhoksuuf yaalii jalqabeera
27 Fuulbaana 2019